Aftenposten oo wareysatay hooyooyin u jawaabay hooyooyin kale. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Aftenposten oo wareysatay hooyooyin u jawaabay hooyooyin kale.
Aftenposten oo wareysatay hooyooyin u jawaabay hooyooyin kale.
Wargeyska Aftenposten ayaa maanta soo daabacay warbixinta kulan ay axadii hore magaalada Oslo ku yeesheen 40-meeyo hooyooyin iyo dumar soomaali ah, kuwaas oo sheegay in kulankoodu uu jawaab u yahay wareysiyo ay horey warbaahinta u siiyeen hooyooyin kale oo katirsan xubnaha masaajidka Tawfiiq.
Faatima Cigge oo u hadleysay hooyooyinka uu wareystay Aftenposten ayaa sheegtay inay xubin masaajidka Tawfiiq ka aheyd 20 sano, waxeyna wax kama jiraan ku tilmaantay in dumar loo diiday inay masaajidka ka codeeyaan, iyada oo raacisay in iyaddu shaqsi ahaan ay codkeeda dhiibatay maalintii ay dhaceysay doorashada codbixinta ah. Waxeyna intaas raacisay in dumarka Aftenposten la hadlay ay yihiin dad faro ku tiris ah.
Wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay inuu khilaaf lamid ah kan ka dhaxeeyo labada gudi ee soomaalida ah, uu ka dhex jiro dumarka xubnaha ka ah masaajidka. Iyaga oo dhowr mar maqaalkooda ku xusay in kulanka hooyooyinka soomaalida ah uu ahaa mid si toos(Live) looga tabinayay barta uu Facebooga ku leeyahay masaajidka Tawfiiq, ayna kulanka maamulayeen koox rag ah.
Hooyooyinka Aftenposten la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin sabab xiligan keeneyso in dumarku ay gadood-dumarnimo ka sameeyaan masaajidka, balse waxey qireen in dumarku uu 30-kii sano uu masaajidku dhisnaa, aysana marna kamid noqon gudiga maamulka masaajidka, iyaga oo dhanka kale xusay in dumarku ay shaqada iyo howlaha ugu badan ka qabtaan masaajidka.
Wargeyska ayaa hooyooyinka soomaalida ah weydiiyay inay la kulmeen ama la hadleen dumarka kale ee xubnaha ka ah masaajidka, si ay dhexdooda dumar ahaan mawqif mideysan u istaagaan, kahor inta aan kulankan la abaabulin. Balse waxaa loogu jawaabay maya.
Fatima Cigge ayaa sidoo kale sheegtay in masaajidku uu lahaan jiray gudi gooni u ah dumarka ilaa laga soo gaaray sanadkii 2016, kaas oo si joogto ah ula shaqeyn jiray gudiga guud ee masaajidka oo ragg kali ah ka kooban.
Ubah: Masaajidku wuxuu hadana siyaabo kala duwan ula dhaqmay xubnihiisa dumarka ah.
Dumarkan uu wareystay AFTENPOSTEN ayaa eedeeyay siyaasiyiin ay kamid tahay Ubah Abdullahi Aden oo katirsan golaha deegaanka Oslo. Iyaga oo ku eedeeyay inay arrimaha siyaasada soo dhex galineyso arrimaha diinta iyo masaajidka.
Ubah oo la hadashay wargeyska Aftenposten ayaa sheegtay inay tahay qof xubin ka ah masaajidka, ayna xaq u leedahay inay si lamid ah xubnaha kaleba ay fikirkeeda uga dhiibato arrimaha khuseeyo masaajidka iyo qaabka loo maamulayo.
Ubah ayaa sidoo kale raacisay ay markii hore rajo ka qabtay in gudiga masaajidku ay kulan ugu yeeraan dumarka loo diiday inay codeeyaan, si ay u dhageystaan dareenkooda, ayna ugala hadlaan wixii dhacay iyo qaabka loo xalin karo.
Balse uu taa badalkeeda ay gudiga masaajidku doorteen inay waji xumo u muujiyaan, ayna soo uruuriyaan dumar kale oo u jawaaba dumarkii hore, iyada oo si live ah looga tabinayo Facebooga masaajidka oo ah meel xubnaha ka dhan ay aheyd in si isku mid ah loogu adeego.
Ubah ayaa sheegtay inay dhageysatay labo guruub ee dumarka ah ee guruubna albaabka laga xirtay, guruubna ay sheegeen inay codeeyeen. Iyada oo Aftenposten u sheegtay in kaamirada masaajidka ku xiran ay noqon karto cadeynta kala saari karta labada guruub.
Xigasho/kilde: Kvinner har i årevis vært de mest aktive i den somaliske moskeen, men plass i styret har de aldri hatt.
Previous articleNAV oo boqolaal aabe si xaqdaro ah ugu diiday fasax ay xaq u lahaayeen.
Next articleKafia Hashi oo soo gashay golaha deegaanka Oslo.
Afar qof oo loo xiray kiis la xiriira dadka Yahuudda
Tromsø: Caruur wado ka heshay lacag 40.000 ilaa 50.000 kr gaareyso oo kaash ah.
Muxuu salka ku hayaa buuqa NRK ee barnaamijkii maalinta Ciida
France: Muxuu yahay sharciga ka dhanka ah Islaamka ee ka carreysiiyey Erdogan?
Tilbud: Ma rabtaa inaad gurigaada ku daawao Tv-yada soomaalida, ciyaaraha, diiniga iyo Sportiga: Daawo
Gudoomiyaha xisbiga SV: Taageerada Norway waa inay Falastiiniyiinta guryahooda la heysto la jirtaa.
Keydka NorSom Velg måned mai 2021 (27) april 2021 (67) mars 2021 (70) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (109) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)
Norsomnews - 17. mai 2021 0
Tromsø: Caruur wado ka heshay lacag 40.000 ilaa 50.000 kr gaareyso...
Norsomnews - 15. mai 2021 0